အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Sep 9, 2011
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, September 09, 2011 Friday, September 09, 2011 Labels: ရသစာစုများ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက သိပ်ကိုချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့ သူဌေးကြီးဟာ ဇနီးကလည်း ဆုံးသွားတာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော့ တစ်ဦးတည်းကျန်ခဲ့တဲ့ သူရဲ့သားကို သိပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ သူဌေးကြီးရဲ့သားဟာ အနုပညာကို အလွန်ဝါသနာပါပြီး ပန်းချီကားတွေ စုဆောင်းတာ သိပ်ကို နှစ်သက် သဘောကျပါတယ်။ သားကို သိပ်ချစ်တဲ့ ဖခင်သူဌေးကြီးကလည်း သားနဲ့အတူ ကမ္ဘာတစ်ခွင် လှည့်လှည်ပြီးတော့ နာမည်ကျော် တန်ဖိုးကြီးပန်းချီကားတွေကို သားစိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူ စုဆောင်းပါတယ်။ သူဌေးကြီးရဲ့သား ဝယ်ယူစုဆောင်းထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေထဲမှာ ပီကာဆို၊ မိုးနေး၊ ဗင်ဂိုး တို့လို နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာများရဲ့ လက်ရာတွေတောင် ပါဝင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီး ပန်းချီကားတွေကို ကျွမ်းကျင်စွာ စုဆောင်းနိုင်သူဖြစ်လာတဲ့ သူ့သားလေးကို ကြည့်ပြီး သူဌေးကြီးဟာ ကျေနပ်အားရ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သားဖြစ်သူဟာ အလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အမြင်အာရုံမျိုးရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းက ပန်းချီကား စုဆောင်းထားသူတွေဆီကနေ တန်ဖိုးကြီးပန်းချီကားတွေကို ရအောင် ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ သူ့သားရဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပုံ၊ အမြင်အာရုံ စူးရှထက်မြက်ပုံ၊ ပန်းချီကားတွေကို အကဲဖြတ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပုံတို့အတွက်လည်း သူဌေးကြီးက အလွန်ဂုဏ်ယူနေခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခုသော ဆောင်းရာသီရောက်ခါနီးမှာတော့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ စစ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လူငယ်တိုင်းစစ်ထဲဝင်ကြတဲ့ နည်းတူ သူဌေးကြီးရဲ့သား လူငယ်လေးမှာလည်း ဘယ်လိုမှ တားမရဘဲ စစ်ထဲဝင်ဖို့ အိမ်ကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်လေး စစ်ထဲဝင်သွားပြီး အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ သူဌေးကြီးဟာ ကြေးနန်းတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ ကြေးနန်းစာထဲမှာ သူဌေးကြီးရဲ့သားဟာ စစ်မြေပြင်တစ်ခုမှာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုးစား ရှာဖွေနေကြကြောင်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူဌေးကြီးဟာ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့ မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင်ဖြစ်ပြီး သူ့သားလေးရဲ့ နောက်ထပ်သတင်းတွေကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာလည်း သူ့သားလေးကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့ရတော့မှာကို ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့လို့နေပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာတော့ သူစိုးရိမ်မိတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ သူ့သားသေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုတဲ့ကြေးနန်းကို လက်ခံရရှိလိုက်ပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးဟာ သူ့အမွေတွေကို ဆက်ခံမဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သူ့သားလေးအတွက် မချိတင်ကဲ ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာနဲ့ စိတ်နှလုံးထိခိုက်ပြီး အိပ်ရာထဲမှာ လဲပါတော့တယ်။
တစ်ခုသော ခရစ္စမတ်ရဲ့ မနက်ခင်းမှာတော့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေကိုသာ အဖော်လုပ်လို့ နေရတဲ့ သူဌေးကြီးအိမ်တံခါးကို တစ်စုံတစ်ဦးက လာခေါက်ပါတယ်။ စိတ်နှလုံး ညှိုးချုံးပင်ပန်းစွာ အိပ်ရာထဲလဲနေတဲ့ သူဌေးကြီးဟာ ချိနှဲ့လေးကန်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ တံခါးရှိရာကို လျှောက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စစ်ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က အဖိုးအိုကို နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ဆိုလာပါတယ်။ လူငယ်စစ်သားလေးရဲ့ လက်ထဲမှာတော့ အထုတ်ကြီးတစ်ခုကို ပွေ့ပိုက်ထားပါတယ်။ လူငယ်လေးဟာ “ကျွန်တော်ဟာ ဦးလေးရဲ့ သားနဲ့ အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းပါ.. ကျွန်တော် ဦးလေးကို ပြစရာရှိလို့ အိမ်ထဲခဏ ဝင်ခွင့်ပြုနိုင်မလားခင်ဗျာ” သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ရင်း ယဉ်ကျေးစွာ ဝင်ခွင့်တောင်းပါတယ်။
ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ စစ်သားလေးက စကားစပြောပါတယ်။ “သူဌေးကြီးရဲ့သားဟာ လူတိုင်းကို သူနဲ့ သူ့အဖေတို့ အနုပညာကို ဘယ်လောက်တောင် ချစ်မြတ်နိုးကြပုံ၊ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပန်းချီကားတွေ စုဆောင်းကြပုံတို့ကို အမြဲပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဒဏ်ရာရပြီး စစ်မြေပြင်မှာ လဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဦးလေးရဲ့သားက ကျွန်တော့်ကို လာကယ်ခဲ့တာပါ။ သူကယ်တဲ့အသက်ဘဲ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတော့တာပါ။ သူ့ကျေးဇူးကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ပန်းချီကို ဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီကိုလာတာက ကျွန်တော့်အသက်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့ ဦးလေးရဲ့ သားကိုယ်စား ဦးလေးကို လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးချင်လို့ ရောက်လာတာပါ ” လို့ ပြောပြီး အဖိုးကြီးလက်ထဲကို ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အထုပ်တစ်ခုကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူဌေးကြီးက အထုပ်ပေါ်က စက္ကူတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော သားဖြစ်သူရဲ့ ပုံတူပန်းချီကား ဖြစ်နေပါတယ်။ ပန်းချီကားထဲမှာ သူ့သားလေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အသေးစိတ် အချက်အလက်လေးတွေကိုပါ အနုစိတ် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားခဲ့တာကြောင့် သူဌေးကြီး စိတ်ထဲမှာတော့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့် သူ့သားရဲ့ မျက်နှာကို အပြင်မှာတကယ် တွေ့လိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပင် ဖြစ်ပေါ်လို့လာပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းများစွာကို တစ်ပြိုင်တည်း ခံစားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် သူဌေးကြီးဟာ လူငယ်လေးကို ပန်းချီကားလက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးစကားဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း သူ့သားရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားကို ဧည့်ခန်းကနံရံပေါ်မှာ အမြဲတမ်းချိတ်ဆွဲထားမဲ့အကြောင်း ကတိပေးပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာ စကားပြောကြပြီး လူငယ်စစ်သားလေးက သူဌေးကြီးကို နှုတ်ဆက်ကာ ပြန်သွားပါတယ်။ လူငယ်လေးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူဌေးကြီးက သူ့ကတိအတိုင်း သူ့သားလေးရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားလေးကို အခြားသော နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာကြီးတွေရဲ့ ဒေါ်လာများစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပန်းချီကားတွေနဲ့ တစ်တန်းတည်း နံရံပေါ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ဧည့်ခန်းကြီးထဲက ထိုင်ခုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီး ထူးထူးခြားခြား ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ သူ့သားပုံတူ ပန်းချီကားလေးကို တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပါတယ်။ သူ့သားရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားချပ်ကြီးက ဖခင်ဖြစ်သူကို ပြုံးပြလို့နေသလိုပါဘဲ။ ဘယ်သောခါမှ အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့မဲ့ သားတစ်ယောက်ကို လွမ်းဆွတ်သတိရခြင်းများစွာနဲ့ အဖိုးအိုပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တွေ စီးကျလို့ လာပါတော့တယ်။
ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ သူ့သားလေး သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကို သူဌေးကြီးက တိတိကျကျ ကြားသိလာရပါတော့တယ်။ သူ့သားဟာ စစ်မြေပြင်မှာ ဒဏ်ရာရထားတဲ့ လူနာများစွာကို ရဲရဲရင့်ရင့် ကယ်တင်ရင်း ကျည်ဆန်ထိမှန်ပြီး သေဆုံးရတယ်ဆိုတာရယ် သူမသေခင်လေးမှာ အသက်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ကယ်တင်သွားနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို သိရပါတယ်။ သူ့သားရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် ဖခင်သူဌေးကြီးဟာ အင်မတန်မှာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း သူ့သားသေဆုံးသွားရတဲ့အတွက် ပူဆွေးဝမ်းနည်း ဖြစ်ရခြင်းကနေလည်း စိတ်ဖြေသာရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့သားရဲ့ သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် လူတိုင်းကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြောပြတတ်သလို၊ သူ့သားလေးရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားဟာလည်း သူ့အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ဘဝမှာ ရခဲ့သမျှ လက်ဆောင်တွေထဲမှာ အဲဒီပန်းချီကားလောက် ဘယ်အရာကမှ တန်ဖိုးမရှိကြောင်းကို အမြဲတမ်း အားမာန်အပြည့်နဲ့ ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ သူ့သားဟာ သေဆုံးသွားပေမဲ့ သူ့အတွက်တော့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရှင်သန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ သူကိုယ်တိုင် ခံယူထားပါတယ်။ သူဌေးကြီးဟာ သူ့သားရဲ့ ပုံတူပန်းချီကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် တယုတယ ဖုန်သုတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးခြင်းတို့ လုပ်တတ်ပါတယ်။
နွေဦးရာသီတစ်ခုမှာတော့ သူဌေးကြီးဟာ အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်လာပါတယ်။ နာမကျန်းဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ သူဌေးကြီးဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးကြီး ဆုံးပါးသွားတဲ့သတင်းဟာ ပန်းချီကား စုဆောင်းသူတွေရဲ့လောကမှာ အပြင်းအထန် ဂယက်ရိုက်ခတ်ပါတော့တယ်။ သူဌေးကြီးမှာ အမွေဆက်ခံသူ တစ်ဦးတည်းသော သားဟာလည်း ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်လို့ သူစုဆောင်းထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကားတွေကို ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာပါလိမ့် ဆိုပြီး လူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ နာမည်ကျော် ပန်းချီကားတွေဖြစ်လို့ လူတိုင်းကလည်း ဒီပန်းချီကားတွေကို လိုချင်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာဘဲ သတင်းတစ်ခု ထွက်လာပါတယ်။ သူဌေးကြီးရဲ့ သေတမ်းစာအရ သူစုဆောင်းထားတဲ့ အဖိုးတန်ပန်းချီကားအားလုံးကို လေလံတင် ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလေလံတင်မဲ့ရက်ဟာ ခရစ္စမတ်နေ့ဖြစ်ကြောင်း ပန်းချီကားစုဆောင်းသူ၊ ပန်းချီချစ်မြတ်နိုးသူတွေ သိအောင် ကြေငြာပါတယ်။ သူဌေးကြီးဟာ သူ့သားရဲ့ ပန်းချီကားကို အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် ရခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ်နေ့ကို လေလံပွဲ ကျင်းပပေးဖို့ သေတမ်းစာမှာ ထည့်သွင်းရေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေလံပွဲကျင်းပမဲ့ ခရစ္စမတ်နေ့ကို ရောက်ပါပြီ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ပန်းချီမြတ်နိုးသူတွေ၊ ပန်းချီကား စုဆောင်းသူတွေဟာ လေလံပွဲကျင်းပရာ နေရာကို အသီးသီး ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း အဖိုးတန်ပန်းချီကားတွေကို မရရအောင် ဈေးပြိုင်ပေးပြီး လေလံဆွဲဝယ်ယူကြဖို့ စိတ်ကူးကိုယ်စီ ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ပြည့်ဝအောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ကြတော့မှာပါ။ ခန်းမထဲမှာရောက်ရှိနေကြသော လေလံပွဲကို တက်ရောက်လာကြသူတိုင်း သူဌေးကြီးရဲ့ ပန်းချီကား အကြောင်းတွေကိုသာ စိတ်ဝင်စားစွာ ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။
လေလံပွဲ စချိန်မှာတော့ အစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့သူက ပထမဦးစွာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ယူလာပါတယ်။ လေလံပွဲကို ရောက်လာကြတဲ့သူတွေ တစ်ဦးကမှ အဲဒီပန်းချီကားကို မမြင်ဖူးကြသလို၊ ပန်းချီကားဟာလည်း နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာတစ်ဦးဦးက ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကား မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပသူက ထိုပန်းချီကားဟာ သူဌေးကြီးသားရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားဖြစ်ကြောင်း လေလံပွဲကို ၄င်းပန်းချီကားနဲ့ စပြီး ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ ကြော်ငြာပြီးတာနဲ့ လေလံပွဲ ကြွရောက်လာသူများထဲမှ စတင်ပြီး ဈေးဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခန်းမကြီးတစ်ခုလုံး ဘယ်သူကမှ ဈေးမဖွင့်ကြဘဲ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်လို့ နေကြပါတယ်။
အချိန်အတန်ကြာတဲ့အထိ ဘယ်သူကမှ ဈေးဖွင့်ခြင်းမရှိတာနဲ့ အစီအစဉ်ကျင်းပသူက စတင် ကြေငြာပါတယ်။
“ဒီပန်းချီကားကို ဒေါ်လာတစ်ရာနဲ့ ကြမ်းခင်းဈေး သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ဒီဈေးကို စပြီးပေးပါမလဲခင်ဗျာ”
ထိုပန်းချီကားကို ဘယ်သူကမှလည်း ဒေါ်လာတစ်ရာတန်တယ်လို့ မထင်ကြတဲ့အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီကမှ အသံထွက်မလာခဲ့ပါ။
ထိုစဉ်မှာ ထောင့်တစ်နေရာကနေ အသံထွက်လာပါတယ်။ “ဘယ်သူက သူ့သားရဲ့ ပုံတူကို စိတ်ဝင်စားမှာလဲ။ အဲဒီ ပန်းချီကားကြီးကို ထားလိုက်စမ်းပါ။ အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေ အလကားဖြစ်တယ်။ တစ်ခြား နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာကြီးတွေရဲ့ ပန်းချီကားကို လေလံစဖွင့်ပါ။” လို့ အော်လိုက်တဲ့အသံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူရဲ့ စကားသံဆုံးတာနဲ့ အခြားသော လူအသီးသီးတွေဆီကလည်း သူ့လေသံအတိုင်း အဲဒီပန်းချီကားကို ထားလိုက်ဖို့ အသံတွေ ကြွက်စီကြွက်စီ ထွက်လာပါတော့တယ်။ ဘယ်သူကမှ သူဌေးကြီးသားရဲ့ ပုံတူကို စိတ်ဝင်စားပုံမရသလို၊ ဝယ်ကြမဲ့ပုံလည်း မရပါဘူး။ သို့သော်လည်း လေလံကျင်းပသူက အခိုင်အမာပြောပါတယ်။ “ ဝမ်းနည်း ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီပန်းချီကားကို အရင်ဆုံးရောင်းရမဲ့တာဝန် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပန်းချီ ကားကိုသာ အရင်ဆုံး လေလံဆွဲကြဖို့ အသိပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ”
အရင်ကအတိုင်းပါဘဲ .. ဘယ်သူ့ဆီကမှ အသံထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လေလံပွဲကို ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်အဖြစ်သာ ရောက်လာတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦးက
“ ကျုပ်မှာ ဒေါ်လာတစ်ဆယ် ရှိပါတယ်။ ဒီပန်းချီကားကို ၁၀ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဝယ်ပါ့မယ်၊ ကျုပ်မှာလဲ ဒီထက်ပိုပြီး မရှိတော့လို့ပါ။ ” ဆိုတဲ့စကားသံ ထွက်လာပါတယ်။
“တစ်ယောက်ယောက်က ဒေါ်လာတစ်ဆယ်ထက် ပိုပေးနိုင်ပါသေးလား ” လေလံပွဲကျင်းပသူက အသံမြှင့်ပြီး အော်လိုက်ပါတယ်။ သို့သော် မည်သည့်အသံမှ ထွက်မလာပါ။ သူ သုံးကြိမ် သုံးခါ အော်မေးပါတယ်။ အသံထွက်မလာပါ။
လေလံပွဲကျင်းပသူက စပြီး အမှတ်စဉ် ရေတွက်ပါပြီ…
“၁……. ၂…….. ၃……… ”
“အမှတ်စဉ် သုံးထိ ရေတွက်ပြီးပေမဲ့ ဒေါ်လာတစ်ဆယ်ထက် ဘယ်သူကမှ ပိုပေးနိုင်သူ ထွက်မလာတော့တဲ့အတွက် ဒီပန်းချီကားကို ဒေါ်လာတစ်ဆယ်ပေးတဲ့ အဖိုးက ပိုင်သွားပါပြီခင်ဗျား”
အားလုံးဆီက လက်ခုပ်သြဘာသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူတို့လက်ခုပ်တီးတာက ဒီပန်းချီကားကြီး ရောင်းထွက်သွားတဲ့အတွက် နောက်လေလံပွဲ မြန်မြန်ကျင်းပတော့မှာမို့ ဝမ်းသာတဲ့အတွက် တီးကြတဲ့ လက်ခုပ်သံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကဲ.. အခု နာမည်ကျော်ပန်းချီကားတွေ စပြီး လေလံတင်တော့ဟေ့၊ စောင့်ရတာကြာနေပြီ” တစ်စုံတစ်ယောက်က အသံကျယ်ကြီးနဲ့ အော်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း လေလံပွဲ မြန်မြန်စဖို့ လိုက်အော်ကြပါတယ်
လေလံပွဲကျင်းပသူက ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို တည်ငြိမ်စွာကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် “ လေလံပွဲ ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျား” လို့ ကြေငြာလိုက်ချိန်မှာတော့ အံ့သြနေတဲ့ ပရိတ်သတ်အတွင်းက မကျေမနပ် ဆူပူသံများ ထွက်လာပေါတော့တယ်။ “ ဘာပြောတယ်ကွ… ငါတို့ဒီလေလံပွဲကိုလာတာ ဘာမဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းချီကားကို လေလံဆွဲဖို့မဟုတ်ဘူး. တစ်ခြား ပန်းချီကားတွေ ဘယ်မလဲကွ၊ အဲဒါတွေကို လေလံမတင်တော့ဘူးလား၊ မင်းတို့ဒီလိုလုပ်လို့ရမလား” စသဖြင့် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အော်ဟစ်သံများက ခန်းမကြီးတစ်ခုလုံး ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။
လေလံပွဲကျင်းပသူက အောင်မြင်ခန့်ညားတဲ့ အသံနဲ့ “အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ ဒေါ်လာများစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပန်းချီကားတွေက ဒီမှာဘဲ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်ရှင်းပြပါ့မယ်။ ရိုးရိုးလေးပါဘဲဗျာ. သားကို သိပ်ချစ်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သေတမ်းစာအရ သူ့သားရဲ့ ပန်းချီကားကို တန်ဖိုးထားပြီး ဝယ်ယူတဲ့သူဟာ ဟောဒီက အဖိုးတန် ပန်းချီကားတွေကိုလည်း အလိုလို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က လေလံပွဲကို တက်ရောက်ကြသူတွေအားလုံးဟာ ဒီလေလံပွဲမှာ တူညီစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ရတာက စစ်ပွဲမှာ အခြားသူတွေရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်ရင်း သူရဲကောင်းပီသစွာ ကျဆုံးသွားသော သားတစ်ယောက်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးထားခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
The Devoted Son ( Author Unknown) ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ပါသည်။
ကျူးဘားသွား တောလား - ၎